Fanamarihana an-tserasera - pejy 28 29 - Ny Diabe Eran-tany
09 / 07 / 2019 08 / 07 / 2019 ny Antonio Gancedo
K. Tokayev, Filohan'i Kazakhstan, androany dia nanao sonia ny lalàna momba ny fankatoavana ny TPNW. Tsy misy isalasalana, andro fifaliana ho an'i Kazakhstan sy ho an'ny planeta iray manontolo. Ny filohan'i Kazakhstan dia manohana ny TPNW Kazakhstan, nanatevin-daharana ny vondrona fanjakana izay nanao sonia ny fifanarahana amin'ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary.
05 / 07 / 2019 05 / 07 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny kaontinanta afrikanina dia miomana amin'ny martsa maneran-tany ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana. Firenena maro no efa miomana hampiantrano ny ekipana ifotony izay hanasongadinana ny hetsika nataon'izy ireo tany Andrefana andrefan'i Maraoka Nandritra ny fitsidihan'ny volana martsa sy Mey, dia maro ny fivoriana natao: tany atsinanana
12 / 07 / 2019 26 / 06 / 2019 ny Antonio Gancedo
Izahay dia manambara, miaraka am-pifaliana lehibe fa ny "Peace Run Award Italia 2019" dia nomena an'i Rafael de la Rubia (Coordinator générale de la martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fahatsiarovana). Io loka io dia nomen'ny International Association Sri Chinmoy Onenss-Home Peace Run Italia. Amin'ity mari-pankasitrahana ity dia fantaro ny ezaka ataon'ireo miaro
Ao amin'ny tranokalan'ny Gravis Ton Sommet ao amin'ny Toulouse, afaka mahita ireo fanazavana nomen'ity vondrona "iraka" ity. Ao izy ireo dia manazava ny "fampielezankevitra ho an'ny fiovana lehibe sy tena ilaina eo amin'ny tenantsika sy izao tontolo izao." Ireo mpitaona ny Nonviolence, izay mihevitra fa tafiditra ao amin'ny Diabe Faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy
17 / 06 / 2019 09 / 06 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ao anatin'ny tontolon'ny volana martsa faharoa, ny fampielezan-kevitra "Mediterranean, Ranomasin'ny fandriam-pahalemana" dia atolotry ny Team Base italiana. Azontsika atao ny mahita soso-kevitra vaovao hanoherana ny Nonviolence: Mediterane, Ranomasin'ny fandriam-pahalemana azontsika jerena i Alessandro Capuzzo sy Annamaria Mozzi de Trieste, Danilo Dolci ao amin'ny Komitim-pihavanana ao Piran, ao
Ny State of New Jersey (USA) no farany nanatanteraka tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena sy ny antenimieran'i Etazonia tamin'ny fankatoavana ny TPAN (Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary) izay nanaiky ny fanapaha-kevitra A230. Ny fanoloran-tena amin'ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary Ity dia mifanaraka ity amin'ny hafa
24 / 08 / 2019 15 / 05 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny Human Chains dia maneho ny fihetsika maneho ny olombelona, ​​manatanteraka hetsika mitambatra eo amin'ireo ankizy marobe mba hanaovana sary an-tsaina amina toerana eny an-dalambe, amin'ity tranga ity: mangataha Fihavanana sy Nonviolence eto ambonin'ny tany. Ity hetsika nokarakarain'ny fikambanana "Mundo Sen Guerras e Sen Violencia da Coruña", dia tarihina
22 / 04 / 2019 13 / 04 / 2019 ny Admin
Ny rojo vy iray dia maneho fihetsika maneho ny maha-olombelona, ​​manatanteraka asa iraisana eo amin'ireo ankizy marobe mba hisehoana imasom-bahoaka amin'ny toerana iray, eny an-dalambe, amin'ity tranga ity: mangataka Fihavanana sy Nonviolence eto ambonin'ny planeta. Ity rojo olombelona ity, nokarakarain'ny fikambanana "Mundo Sen Guerras sy Sen Violencia da Coruña",
12 / 07 / 2019 02 / 04 / 2019 ny Admin
27 / 06 / 2019 15 / 03 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny fihetsiketsehana dia natolotry ny BNG sy ny Atlantika Tide ary notohanan'ny vato PP sy PSOE. Rocío Fraga, Mpanolotsaina ho an'ny fitoviana sy ny maha-samihafa azy dia namaky ny fangatahan'ny hetsika: "Ny filankevitry ny tanànan'i A Coruña ... dia maneho ny firaisankina miaraka amin'ny olona rehetra sy ny vondron'olona voakasik'ireo fipoahan'ny baomba atomika ary